Mpanamboatra sy mpamatsy lamba graphene ambongadiny | Sheerfond
Volom-bava fanafanana io. Ny kojakoja momba ny Heating dia ravina graphene vita amin'ny sheerfond. Ny takelaka graphene dia atsangana ao anaty lamba. Ny bokotra dia mifandray amin'ny ravina graphene. Ny bokotra dia voaisy tombo-kase amin'ny silica gel. Ny bokotra fanafanana dia azo alefa amin'ny alàlan'ny bokotra ary azo ovaina koa ny hafanana. Manana paosy kely izy, apetraho ao aminy ny banky herinaratra, afaka manome herinaratra ny ravina graphene izy. Amin'ny toetr'andro mangatsiaka, afaka manome hafanana antsika izy io, vokatra manavao be, tena ...
Volom-bava fanafanana io. Ny kojakoja momba ny Heating dia ravina graphene vita amin'ny sheerfond. Ny takelaka graphene dia atsangana ao anaty lamba. Ny bokotra dia mifandray amin'ny ravina graphene. Ny bokotra dia voaisy tombo-kase amin'ny silica gel. Ny bokotra fanafanana dia azo alefa amin'ny alàlan'ny bokotra ary azo ovaina koa ny hafanana.
Manana paosy kely izy, apetraho ao aminy ny banky herinaratra, azony atao ny manome herinaratra ny ravina graphene.
Amin'ny toetr'andro mangatsiaka, afaka manome hafanana antsika izy, vokatra manavao be iray, azo ampiharina, azo esorina ny takelaka fanafanana ary azo hosasana in-50.
Azonao atao ny manamboatra ny sary famantarana, manamboatra ny loko ary manamboatra ny fomba.
Hanjelatra ny bokotra rehefa miasa izy ireo, ary azonao atao ny manamboatra ny sary famantaranao eo amin'ny bokotra mba hampiharihary ny marikao.
Ny fitaovana rehetra dia mampiasa fitaovana ara-tontolo iainana mba hahatonga ny vokatra ho azo antoka sy ho salama kokoa, vokatra azo avy amin'ny tontolo iainana.
Ny vokatra elektronika manavao dia hevitra vaovao momba ny vokatra, novambra 2021.
Fanomezana lafo vidy, fanomezana mamorona ho an'ny reny, dada na namana, na ny mpanjifa na mpankafy malalanao.
Ny vokatra misy patanty dia namboarina ho anao, Custom logo, fonosana mahazatra.
Raha manana hevitra tsara ianao dia ilazao ny ekipanay R&D fa hanome anao tolotra mandroso izy ireo, hamolavola vokatra tsara ho anao, izay hahagaga anao ary hanao izay itiavan'ny mpanjifanao azy manokana. Andao hiara-hiasa isika ary manantena ny vaovaonao
Izahay dia orinasa elektronika miaraka amin'ny fanamarinana ISO 9001, mari-pahaizana BSCI.
Ny masontsivana lehibe ：
Sehatra fampiasana Pr fanomezana ara-barotra vaovao, fanomezana andro nahaterahana, fetin'ny ray, Fetin'ny reny, fanomezana fisaorana
Volavola namboarina pirinty Designs
Haben'ny vokatra 1100mm * 150mm * 9mm
lanjan'ny vokatra 200g
Haben'ny fonosana 305mm * 185 * 20mm
Quantity isaky ny entana
Milanja isaky ny boaty 10kg
Teo aloha: Saron-tava masaka Graphene